Sida aad iibsanayso baabuur, iibsigu RV loo isticmaalo (Vehicle tamashlaha ah) ama HCR ayaa noqon kara hab fiican si aad u hesho heshiis ah laga cabsado. Sida baabuurta, Qiimaha khasaara RV ee xilligan ay yihiin off ah saamigii. Laakiin, waxaad u baahan tahay inaad naftaada iyo maalgashiga ilaaliyo adigoo samaynaya cilmi-yar oo ku saabsan RV aad ku talajirto in wax iibsiga.
Hubi An RV Vin Number Halkan
Sida baabuurta, RV leeyihiin VIN ah (lambarka aqoonsiga gaadhiga) oo waxaa ku yaal meelo badan oo kala duwan oo ku saabsan RV ah. Waxa ay inta badan la geeyaa meel ka mid ah in baabuur iyaga lahaa, on dhoweeyaa oo waxaad awoodi doontaa in si aad u aragto iyada oo raadinaya dhex hore ee muraayada hore. Si kastaba ha ahaatee, tani ma aha had iyo jeer kiiska. Soo-saareyaasha ayaa ha ku riday meelo kala duwan sida engine iyo jir. Waxa kale oo aad eegi kartaa taageerada muhimka ah (taageero hiitarka) , on column isteerinka, darawallada ama albaabka rakaab ama tiirka albaabka, iyo mararka qaarkood ku brannmur. Waxa kale oo aad eegi kartaa buuga milkiilayaasha si aad u aragto haddii ay jiraan ku qoran yahay, laakiin waxa ugu fiican si loo xaqiijiyo in tirada waa isku mid sida in waxa RV ah.
Haddii milkiilaha iyaga ayaa leh, waxa kale oo aad eegi kartaa waraaqaha iibsiyada, DoCS horyaalka iyo caymiska. VIN waa wax gaar u ah RV, ma laba motor guriga leedahay mid la mid ah, sidaa daraadeed waxa muhiim ah in aad hesho xaq u tiro VIN ah.
Sidaas oo kale in aad eegto lahaa VIN ah baabuur in aad ayaa ka fiirsaneysa inay wax gadashada, aad iyo sidoo ordi kartaa jeeg VIN RV. Warbixintan waxay ku siin doonaa macluumaad in qofkii ku gaari laftiisa, decoder RV ah in uu kuu sheego oo saaraha waa, halkaas oo la dhisay iyo fursadaha ka soo saaraha iyo enginge iyo macluumaad gudbinta.
By ordaya ah RV tirada VIN raadinta waxa kale oo aad ka heli doontaa macluumaad kale oo qiimo leh, sida haddii RV ayaa la sheegay in shil oo ballaaran sida ay u ahayd. Sidoo kale haddii RV ayaa dhawr jeer bedelay gacmaha u soo wargelin doonaa in ay suurto gal dhibaatooyin iyo igmashada ama Dhabarkooda oo duudduuban. Waxa kale oo ay taxaan doonaa haddii ay jiraan wax Kahor suurto gal on RV in mulkiilaha uusan fasax lacag. Iyo ugu dambayntiina waxay muujin karaan wax kasta oo dib loogu soo yeero kara in aan la hadlay.
By sameeyo VIN RV ah hubi in aad naftaada badbaadin karin qaar ka mid ah madax xanuun ku iman kara hoos wadada oo caymiska oo raqiis ah nabad qaar ka mid ah Xusuustana markaad wax iibsigu RV loo isticmaalo.